fanampiana ara-teknika sy ara-pitantanam-bola - Solidis
Inona no azonao omena anao?
Ny traikefanay ara-stratejika sy ara-pitondrana dia ahafahanao maminavina mialoha mandritra ny fiainan’ny orinasanao. Miaraka amin’ny sampan-draharaha momba ny fitantanana, ny fitantanam-bola ary ny hetra, ny federasiona dia miara-dalana aminao mba hanamora ny fahazoanao fampindramam-bola ka mba ahafahanao manitatra misimisy kokoa ny asanao.
Manampy anao hahita ny orinasanao amin’ny fijery hafa.
Miara-dia aminao rehefa miatrika sedra vaovao ianao na mitady mpiray ombon’antoka ara-bola.
Mitondra fanampiana manokana ho anao amin’ny fandrafetana ny drafitrasan’ny tetikasa.
Miandraikitra ho anao ny fitantanam-bola sy ny fanaraha-maso ireo fé-potoana.
Mpisitraka ny Antoka SOLIDIS
Mpikambana ao amin’ny Federasiona MIARY
Inona avy ireo asanay?
Fiandraiketana ny fitantanam-bola izay iandraiketan’ireo manam-pahaizana tena mahay mba ahazoana tatitra ara-kajy manambara ny zava-misy ara-toe-karena sy ara-bolan’ny orinasanao : fitanana an-tsoratra ireo asa, fandrafetana tatitra an-tsoratra momba ny fanaraha-maso ny fitantanam-bola, fanaovana tatitra momba ny toe-bola, fanambarana momba ny hetra sy ara-tsosialy.
Fanampiana manokana amin’ny fandrafetana drafitrasan’ny tetikasanao : famaritana ny sehatrasa, famaritana ny ho enti-manana (ara-teknika sy ara-batana) mifanaraka amin’ny sehatra tsirairay, famoronana kitapom-bola famatsiana mifanaraka amin’ny drafim-pitantanam-bola manankery, fandinihana ny sehatra tsirairay (tombotsoa, olana, loza manambana, fetezana), fandrafetana ny drafitrasa(ara-dalàna, ara-pikambanana, ara-pandaminana, ara-teknika, ara-bola ary ara-barotra), fanaraha-maso ireo fe-potoana.
Fiarahana aminao amin’ny fitadiavana mpiray ombon’antoka ara-bola.
« Kitapom-bola hoan’ny fampiasam-bola natao hoan’ny méso finance!»